प्रेरक प्रसंग: साहसीका लागि केको असम्भव ? – Etajakhabar
प्रेरक प्रसंग: साहसीका लागि केको असम्भव ?
काठमाडौं । फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट आफ्नो सेनालाई अल्पस पर्वतको बाटो हुँदै अघि बढाउन चाहन्थे र बाटो खोज्नका लागि उनी आफैँ पहाडको बेँसीसम्म पुगेका थिए । बाटो खोज्दै जाँदा उनले त्यहाँ एकजना वृद्धालाई भेटे । नेपोलियनले उनीसँगै बाटोबारे जानकारी लिने प्रयास गरे । त्यसक्रममा उनको जिज्ञासा सुनिसकेपछि ती वृद्धाले भनिन्, ‘हे मूर्ख, तिमीजस्ता धेरै मूर्खले यो दुर्गम पहाड चढ्ने प्रयासमा आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
विनाकारण मर्नुको कुनै फाइदा छैन । त्यसैले यहाँबाट खुरुक्क फर्केर जाऊ ।’ वृद्धाको भनाइ सुनेर नेपोलियन मुसुक्क मुस्कुराए र भने, ‘आमा, राम्रो भयो कि तपाईंले मलाई कठिनाइबारे समयमै सतर्क गराउनुभयो । यसले मेरो हौसला अझै बढेको छ । अब म सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नेछु । तपाईंको भनाइबाट मैले निकै ठूलो पाठ सिकेँ । तपाईंको कृपाले म यो पहाड एक दिन अवश्य पार गरेरै छोड्नेछु ।’नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
नेपोलियनको अठोट सुनेर ती वृद्धा दंग परिन् र सोचिन्, यस्तो खतरालाई यसरी चुनौती दिने हिम्मत गर्ने मानिस कुनै साधारण व्यक्ति हुनसक्दैन । उनले आशीर्वाद दिँदै भनिन्, ‘साहसी मानिसका लागि यो संसारमा कुनै काम असम्भव हुँदैन । जाऊ तिमी आफ्नो लक्ष्यमा अवश्यै सफल हुनेछौ ।’
केही समयको कठिन प्रयासपछि नेपोलियन अल्पस पर्वत पार गर्न सफल भए । तर, उनले ती वृद्धाको त्यो भनाइ भने समय–समयमा याद गरिरहे, ‘साहसी मानिसका लागि संसारमा कुनै काम असम्भव हुँदैन ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७३ समय: ५:५६:१६